Diyopost.com :: दाङको घोराहीमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बन्ने, मैदानको लागी ७ कट्ठा जग्गा खरिद ! दाङको घोराहीमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बन्ने, मैदानको लागी ७ कट्ठा जग्गा खरिद ! - Diyopost.com
दाङको घोराहीमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान बन्ने, मैदानको लागी ७ कट्ठा जग्गा खरिद !
घोराही, २६ भदौ । घोराही उपमहानगरपालिकाले ‘खेलकूद सबैका लागि : खेलाडी राष्ट्रका लागि’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेशस्तरको रङ्गशाला निर्माणमा लगानी बढाएको छ । घोराहीलाई खेलकूद क्षेत्रको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगितासमेत आयोजना गर्न मैदानको व्यवस्थापनमा पौने एक करोड खर्चिएको छ ।
उपमहानगरपालिका– १७ गुलरीयामा निर्माणाधिन खेलकूद मैदानका लागि सात कठ्ठा २ धुर जग्गा खरिद गरिएको छ । मैदान साँघुरो हुने भएपछि स्थानीयवासीको जग्गा उपमहानगरले खरिद गरेको हो । सात कित्तामा रहेको सात कठ्ठा दुई धुर जमीन खरिद गरी मैदानलाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने काम शुरु भएको इञ्जिनीयर रामधन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार करीब रु ७५ लाखमा उक्त जग्गा खरीद गरिएको हो । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा खेलकूदको विकास गर्न सशर्त तर्फ एक लाख र निशर्त तर्फ रु १३ लाख ६० हजार गरी रु १४ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतियोगितामा २०४१ सालदेखि सहभागिता जनाउन शुरु गरेको दाङले साढे ४ दशकको अवधिमा सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न नसकेको दाङ क्रिकेट स्ङ्घका अध्यक्ष प्रदीप मजगैयाले जानकारी दिनुभयो । खेल मैदानको अभावमा प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादन हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष मजगैयाले रङ्शाला निर्माण भएसँगै खेलाडीमा उत्साह जागेको बताउनुभयो ।